बोल्न नसक्ने श्रीमती, सुत्ने ठाउँमा पानीको ताल, चुहीने झुपडीमा खानेकुरा केही छैन (भिडियो) – Complete Nepali News Portal
बोल्न नसक्ने श्रीमती, सुत्ने ठाउँमा पानीको ताल, चुहीने झुपडीमा खानेकुरा केही छैन (भिडियो)
Tika Prasad Amgain July 30, 2020
कास्कीको अन्नपुर्ण गाँउपालिका पाउँदुरका टेक बहादुर मल्ल ठकुरी, जसको उमेरले तिन बिस नाघि सक्यो । बुढेसकालले छपक्कै छोपिसक्यो । शरिर शिथिल हुदैगयो, र हातखुट्टाहरु शक्तिहिन हुदै गए । उनी आफ्नी अर्धाङ्गिनीसंग मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमै एक सानो झुपडिमा बस्छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुका गाडिले उछिट्याएका पानीका थोपाहरु उनको ओछ्यानसम्म पुग्छन् । हरेक जसो वर्षातको समय उनि पानीको आहालमा सुत्नु पर्छ । तर, उनको त्यो झुपडिमा कुनै नेता र मन्त्रीका नजर परेनन् । उनि अचेल हरेक दिन जसो छानो हेरेर दिन विताउछन्, चुलो कुर्छन् र ओछ्यानको पानी उभाउछन् । अहँ, सिहँदरबार पुगेन उनको आगनमा, श्रमिति थलिएर ओछ्यान पर्दा पनि पुगेनन जनताका प्रतिनिधि उनको बलेनीमा । हुन त, घरको बलेनी नै कहाँ छ र ? ओछ्यानमा पानी झर्ने घरको पनि बलेनी हुन्छ र ? हो त, उनि खुला आकासमुनी जिवन काटिरहेका भन्दा पनि फरक नपर्ला । धर्तिलाई आगन र आकासलाई छानो बनाएका छन् उनले (हेनुहोस् पुरा भिडियो)